[Friday, April 14th, 17] :: Wararkii ugu dambeeyay: Ciidamada Itoobiya oo isaga baxay Dhuusamarreeb
Dhuusamarreeb (RH) Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamarreeb ee xarrunta gobalka Galagaduud ayaa sheegaya in ciidamada Itoobiya ay isaga huleeleyn magaaladaas.
Dadka deeganka ayaa sheegay in badi ciidamadii ku sugnaa magaalada ay ka baxeyn iyagoo aaday dhinaca degmada Guriceel, waxaana la hadalhayaa in ay aadayaan wadankooda iyo in ay u wareegayaan saldhigooda ugu weyn ee ku yaalla Beledweyne.
Ciidamo kooban ayaa la sheegay in magaalada ay sii joogi doonaan kuwaasoo tiradooda lagu sheegay 20% kuwaasoo horrey magaalada u sii joogay.
Ciidamada maanta ka baxay Dhuusamarreeb ayaa ahaa kuwii ka soo baxay degmada Ceelbuur ee isla gobalka Galgaduud.
Waxaa bixitaanka ciidamada Itoobiya si weyn looga dareemay magaalada Dhuusamarreeb iyo magaalada Cadaado oo xarrun KMG u ah maamulka Galmudug.
Weli si rasmi ah looma sheegin sababaha ciidamadan ay u baxayaan, balse waxaa la sheegayaa in ciidamadan aysan ka tirsaneen AMISOM oo ay yihiin kuwa gacan siiya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISO.
Dhinaca kale, maamulka Ahlu Sunna oo gacanta ku haya magaalada Dhuusamarreeb ayaa sheegay in ay ku filan yihiin ammaanka magaalada oo horreyba u joogeyn magaalada iyaga.